ဘိုးအင်း 767-400 အိမ်အရောင်များ FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 47 ကို MB
downloads ရယူရန္ 25 478
Author: မော်ဒယ် et ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ProjectOpen က Sky, သားက de Warren
ဒီကျောက်မျက်ခံစားကြည့်ပါ! ကျနော်တို့ကအရည်အသွေးပိုကောင်းမတှေ့နိုငျတယျ။ တကယ့်ဘိုးအင်း 767-400 နဲ့တူလှပါတယ်။ အားလုံးအသေးစိတျပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ panel ကအလွန်လှပအလုပ်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသံအလွန်လက်တွေ့ကျဖြစ်ကြပြီးသူတို့အတိအကျဒီလေယာဉ်ကိုမှလာကြ၏။ သင့်ရဲ့ဂရပ်ဖစ် configuration ကိုခွင့်ပြုလျှင်သင်အမှန်တကယ်ဤအံ့သြဖွယ် add-on ကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးမဖြစ်မနေ!
ဘိုးအင်း Bombardier B52 D ကို Stratofortress FS2004